प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा को को जाँदैछन्? | Nagarik News - Nepal Republic Media
प्रधानमन्त्री अोली अघिल्लो कार्यकालमा भारत भ्रमणमा निस्कदा । फाइल तस्बिर/नागरिक
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोली सँधैजसो जम्बो हुँदा आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा यसपटक सीमित व्यक्तिलाई मात्र सरकारी खर्चमा समावेश गर्न लागिएको हो ।’ भ्रमण दलको संयोजन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीका एक जना सहयोगीले भने, ‘गोरखापत्र संस्थानलाई पनि यसपालि आफ्नै खर्चमा संवाददाता पठाउन लगाईदैछ ।’ निजी सञ्चार माध्यमबाट झन्डै तीस जना पत्रकारहरु आफ्नै खर्चमा सामेल हुनेछन् । यसैगरी यसपटक कलाकारहरु राजेश हमाल, दिनेश डिसी पनि सहभागी हुँदैछन् ।
खर्च कसरी व्योहोरिन्छ?
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमन्डल सामेल हुने परम्परा छ । ओहोदामा रहेका सरकारी अधिकारीका अतिरिक्त सांसदहरुको टोली, उद्योगी व्यापारीको टोली, सञ्चारकर्मीको टोली, प्रधानमन्त्रीकै सहयोगीको समूह र यसपटक कलाकारको समूह भ्रमण दलमा सामेल हुनेछन् ।
आतिथ्य दिने भारतले १५/१६ जनाको मात्रै खर्च व्योहोर्ने गर्छ । बाँकी सदस्यको खर्च नेपाल सरकार र स्वयंले व्योहोर्ने चलन छ ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ १९:३५ मंगलबार
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा को को जाँदैछन्